July 2016 – Radio KeyFM
Uhuru oo sheegay in ay gacanta ku dhigi doonaan kuwa gubaya goobaha waxbarashada
30th July 2016	Somali Language 0
Madaxweyne Uhuru Kenyatta ayaa ugu dambayn ka hadlay gubitaanka goobaha waxbarashada iyo caqabadaha ay keenayso gubitaanka iskuulada dalka oo tan iyo bishii aynu soo dhaafnay aad u kordhaysay. Maalinkii shalay ayaa madaxweyne Kenyatta sheegay dowladiisu in ay si adag ula xisaabtami doonto kuwa ka dambeeya hirarka dabka la qabadsiinayo iskuulada. …
Mudane ka tirsan Baarlamanka oo ugu baaqay dowlada Furitaanka Xadka dhanka Soomaaliya
30th July 2016	Uncategorised 0
Xildhibaanka laga soo doorto bariga Wajir, Abass Sheikh Mohamed ayaa doonaya in xadka Kenya iyo Soomaaliya dib loo furo,taasi oo u ogolaanaysa in si xor ah ay u socdaan dhaq dhaqaaqa adeegyada iyo badeecadaha. Sheikh Mohamed ayaa sheegay in ay keentay xirnaanshiyaha xadka in ay kororto soo galinta sharci darada …
Wakiilada Baarlamanka Kowntiga Garissa oo Doonaya in laga qaado sii haynta Maaliyada,ku xigeenka Gavanaha kowntiga
Wakiilo ka tirsan golaha baarlamanka ee kowntiga Garissa ayaa dadaal ugu jira in laga qaado gavana ku-xigeenka kowntiga in uu sii hayo xilka wasaarada maaliyada ee kowntiga. Mudanayaashan ayaa ka tirsan gudiga maaliyada,xisaabadka iyo maal galinta dadweynaha ee baarlamanka hoose ee Garissa. Gavanaha Garissa Nathif Jama ayaa u magacaabay in …
Dhalinyaro lagu tuhmay Alshabab oo Maxkamad lasoo taagay
Labaa dhalinyaro ah ayaa maxkamad ku taala countiga Malindi ku xukuntay in ay ka tirsanyihin Kooxda Al-shabaab oo ka dagaalanta geybo kamid ah dalka Soomaliya. Edeysashan oo kala ah Imran Hassan Ahmed iyo Abdul Aziz Ali sultan ayaa la sheegay in lala soo qabatay haweenay magaceda lagu sheegay Hamdi Majid …
EACC oo xirtay Taliyaha Booliska Taraafikada ee Kericho.
Saraakiisha gudiga anshaxa iyo la dagaalanka musuqmaasuqa ee EACC ayaa gacanta kusoo dhigay taliyaha ciidamada wadooyinka taraafikada ee countiga Kericho James Kilii. Mr James ayaa xarigiisu uu yimid, kadib markii uu codsaday in la siiyo lacag dhan 5000 oo shilinka dalka ah si loo sii daayo baabur ay ciidamada taraafikda …
Isiolo : Saraakiil ka tirsan Laanta Dalxiiska oo laaluush lagu qabtay
Labo kamid ah saraakiisha maalgalinta dalxiiska ayaa xabsiga loo taxaabay,kadib markii lagu eedeeyay in ay laaluush qaateen. Saraakiisha dambi baarista ee ka tirsan EACC ayaa qabtay labadan sarkaal oo lagu kala magacaabo Francis Mwangemi iyo Martin Wekesa. Labadan qof ayaa ka howl galayay kowntiga Nyeri. Taliyaha EACC bariga sare, Ignatius …
Labo General oo Turki ah oo is casilay kahor kulan ay yeelanayeen golaha sare ee ciidamada
29th July 2016	Somali Language 0
Labo General oo ka mid ah saraakisha ugu sarsareysay ciidamada dalka Turkiga ayaa iscasilay saacado kahor kulan uu golaha sare ee milatariga dalka Turkiga uu dib u eegis ku sameynayo ciidamada dalka Turkiga. Generaladan ayaa gudbiyay is casilaadooda iyagoo ka soo horjeeda shaqo ka fariisinta ay dowlada Turkiga ka fariisisay …
Nin Lagu Xumkumay 7 Sano Xariga ah Kadib Markii uu Saxiibkii Dilay
Maxkamad fadhigeedu yahay countiga meru ayaa Nin 36 sano jir ah ayaa ku xukuntay xabsi 7 sano oo xarig ah kadib markuu dilay nin saxiibkiis. Ninkan oo magacisa lagu sheegay David Gitonga, ayaa toreyey saaxiibkiis oo lagu magacabi jiray, Gerald Kimutu, iyadoo falkan uu dhacay 22 bishii March ee sanadkii …
Askari Boliis ah oo Isdilay Xili Uu Ka Cabsi Qabay in Turxaanbixin Lagu Sameeyo Shaqadiisa
Aksari ka tirsan ciidanka boliiska dalka qaybta wadooyinka, ayaa xalay isku dilay gurigiisa oo ku yaala deegaanka Milimani ee countiga Kisumu xili uu ka cabsi qabay natiijadda turxaan bixin lagu samaynayay shaqadiisa. Askarigani oo lagu magacaabi jiray Alfred Ndalanu, ayaa la sheegayaa inuu laba mar isku dhuftay xabad uu ka …
Ciidanka Militeriga Itoobiya iyo Jabhadda Mucaradka ee OLF oo Ku Dagaalamaya Dhulka ku Dhow Xadka Kenya
Dagaal la sheegay inuu u dhaxeeyo ciidanka militeriga Itoobiya iyo Jabhadda mucaaradka ee OLF, ayaa la sheegayaa inuu ka dhacay meelo ku dhow xadka dalkani Kenya, kuwaasi oo qasaare gaarsiiyay dadka deegaanka gudaha Dalkani Kenya. Dagaalka ayaa la sheegayaa inuu samaayn ku yeeshay dadka Kenyanka ah ee ku sugan gudaha …